I-China Cavitation rf vacuum yokulahleka kobunzima boomatshini bokuvelisa kunye neFektri | GGLT
Umatshini wokulahleka kobunzima be-rf
Umatshini wethu weCavitation rf we-vacuum wokulahleka kobunzima nge-infrared RF Umshini we-Roller technology udibanisa ukukhanya kwe-infrared, i-bi-polar radio frequency energy kunye ne-vacuum, ebangela ukufudumeza okunzulu kweeseli ezinamafutha, izicwili zazo ezijikelezileyo kunye ne-dermal collagen fibers. Olu hlobo lokushushubeza ngokufanelekileyo kunye ne-vacuum lukhuthaza ukukhula kwe-collagen entsha kunye ne-elastin engcono ekhokelela ekunciphiseni kwendawo ekunciphiseni kwesikhumba, umthamo womzimba, kunye nokuphuculwa ngokubanzi kwesakhiwo kunye nokuthungwa.
IVelashape lunyango olutsha olungangenisi intsholongwane olusebenzisa indibaniselwano yetekhnoloji yokuchaphazela umzimba wakho kunye nokunciphisa ukubonakala kweeselulite. Itekhnoloji ye-vacuum ilawula ulusu lwakho ngelixa ukukhanya kwe-infrared kunye ne-bi-polar radio frequency amandla amandla atshisa ngobushushu iiseli ezinamanqatha kunye nezicubu ezijikelezileyo.
Isetyenziselwa unyango: Ukususwa kweCellulite, ukuCutywa komzimba, ukuqiniswa kwesikhumba, ukuphakanyiswa kobuso, ukususwa kombimbi, ukunciphisa umjikelo womzimba, ulusu olugudileyo, ukuthambisa umzimba kunye nokunyanga indawo yejwabu leso.
4 iphatha umatshini weVelashape --- Umshini + we-infrared Laser + Bipolar RF + Rollers
I-laser ye-infrared inciphisa ukunganyamezeli kolusu ngokufudumeza ulusu kunye namandla e-RF angena nzulu kwizicwili ezihlanganayo ukonyusa ukusasazeka kweoksijini ngaphakathi.
I-2.Vacuum kunye neeroller eziyilwe ngokukodwa zilawula ukungena kwe-RF nokuba yi-5-15mm. Nip kwaye wolule izicubu ezinxibelelanayo zefibrillar iphucula kakhulu ukusebenza komzimba.
I-3.Ithekhnoloji ethi ulusu lusonge ulusu lwenza ukuba amandla e-RF angene kulusu olusongiweyo, ukuphucula ukusebenza kunye nokukhuseleka, nkqu kunyango lwendawo yejwabu ephezulu.
BONISA Isikrini esibonisiweyo: 10.4 "TFTchromaticescreen
Bonisa isikrini kwiziqwengana zesandla 3.2 "no-3.5"
AMANDLA OLAWULO LWERadio 100watt
UXINEZELELO OLUPHIKILEYO Ixabiso elipheleleyo le-90kPa-25kPa (68.4cmHg-19cmHg)
Ukubuyisela ixabiso: 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)
UTSHINTSHO LWEROLI 0-36rpm
IMODE YOKUSEBENZA YOKUGQIBELA Iindidi ezi-4 (ku, Ngaphandle, ngasekhohlo, ngasekunene)
SAT ETY UKUJONGA Ixesha lokwenene emgceni
UXINONGO LWE-RF AMANDLA Ubukhulu: 50J / cm3
UKUHAMBA NGOKUGQIBELA 940nm
AMANDLA ATHILEYO 5-20w
INDAWO YONYANGO 4mmx7mm, 6mmx13mm, 8mmx25mm 、
ULAWULO OLULINGANISELWEYO KWAMANDLA 850VA
IMODE YOKUSEBENZISA INKONZO AC230 / 110V +/- 10% 50Hz +/- 1Hz
UKUSINDA OKUSHIYEKILE 79kg
UBUDE BOMZIMBA 59CM * 60CM * 135CM
Umbuzo: Ndingalindela ziphi iziphumo?
I-A1: Kwezilingo zeklinikhi, amandla okuchaphazela umzimba weVelaShape kukhokelele ekunciphiseni ubungakanani bengubo enye emva konyango.
I-Q2: Ndiza kulubona ngokukhawuleza kangakanani utshintsho emva konyango?
I-A2: Uya kuqala ukuqaphela ukuphuculwa ngokuthe ngcembe kwendawo enyangiweyo kwangoko njengoko umhlaba wolusu uqala ukuziva ulula kwaye uqinile. Ngokuhamba kwexesha uya kuqaphela umjikelezo omncinci kuyo yonke indawo ephathwayo kunye nokuncipha kokubonakala kwe-cellulite, kwaye iziphumo ezilungileyo ziya kubonakala malunga neeveki ezili-10.
I-Q3: Mangaphi unyango ekufuneka ndilwenzile?
I-A3: Ngokwesiqhelo kuthatha unyango lwe-3-4 ukufezekisa iziphumo ezilungileyo. Amaxesha amaninzi kunokwenzeka ukuba ubeke endaweni enye iseshoni yonyango ukuya kuthi ga kwiseshoni ezintathu ezifutshane.
Egqithileyo I-Professional Nd yag laser tattoo ukususwa kwe-808 diode yokususa iinwele kumatshini we-laser
Okulandelayo: Kumatshini wokucoca i-roller ye-salon
Umatshini wokukrola umzimba we-HIFEM
Isakhiwo se-HIEMT esime nkqo